Victoria မေမေမျက်ရည်ကျပြီးပြောပြတဲ့… သမီးလေးနဲ့ပက်သက်ခံတဲ့စားချက်တွေကြားသိရပြီး…. မျက်ရည်ကျတဲ့အထိ….ခံစားခဲ့ရတဲ့ချစ်သုဝေ – ရှအေလငျး
Victoria မေမေမျက်ရည်ကျပြီးပြောပြတဲ့… သမီးလေးနဲ့ပက်သက်ခံတဲ့စားချက်တွေကြားသိရပြီး…. မျက်ရည်ကျတဲ့အထိ….ခံစားခဲ့ရတဲ့ချစ်သုဝေ
ခေတ်၊ သစ် တို့ ရဲ့ မေမေချစ်သုဝေကတော့ ချစ်စရာကောင်းလွန်းလှတဲ့ သူမရဲ့အပြုအမူလေးတွေကြောင့် ပရိသတ်တိုင်းကချစ်နေရတာပါ။ ကလေးအမေလို့ထင်မှတ်စရာမရှိရလောက်အောင် နုပျိုလွန်းသူလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ သရုပ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာလည်း ပီပြင်ကျွမ်းကျင်ရုံမကပဲ အဆိုဘက်မှာလည်း ပါရမီရှိသူတစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
သူ မ ဟာ လတ်တလောမှာဖြစ်နေတဲ့ နေပြည်တော်က ဗစ်တိုးရီးယားလေးရဲ့အမှုကိစ္စအတွက်စိတ်မကောင်းကြီးစွာဖြစ်နေရတာပါ။ သမီးလေးနဲ့ပက်သက်ပြီးတော့လည်း သူမတို့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်လုံးဟာ တက်တက်ကြွကြွပါဝင်ဆောင်ရွက်နေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအမှုနဲ့ပက်သက်ပြီးတော့လည်း ထွက်ရှိသမျှသတင်းတွေကိုလည်းအချိန်နဲ့တစ်ပြေးညီဝေမျှပေးနေတာပါ။ လွန်ခဲ့တဲ့ မိနစ်ပိုင်းကလည်း ဒီအမှုကိစ္စနဲ့ပက်သက်ပြီး သူမရဲ့လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာမှာအခုလိုရေးသားခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
” Victoria အမှုဟာ တစ်နိုင်ငံလုံးကသားသမီးရှိတဲ့မိသားစုတွေနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့အမှုပါ..”
သမီးလေးမေမေရဲ့ မျက်ရည်နဲ့ပြောတဲ့ သမီးလေးအပေါ်ထားတဲ့သူ့ရဲ့မေတ္တာတွေ,ယူကျုံးမရမှုတွေ,ကြောက်ရွံ့သိမ်ငယ်ရမှုတွေက နားထဲပဲ့တင်နေရောပဲ..နဂိုကစိတ်နုတဲ့ကိုယ့်မှာ ခေါင်းထဲမရောက်ချင်ပဲရောက်လာတိုင်း မျက်ရည်တွေကျရတယ်..
ကိုယ်သမီးလေးတွေအတွက်လည်း ဒီမြေဒီရေ ဒီဥပဒေအောက်မှာ ကြီးပြင်းလာရမှာတွေးရင်းရင်တွေပူ ဗလောင်ဆူ ,,မဖြစ်သေးတာတွေကြိုတွေးပူ..,,
အလုပ်တွေဆက်တိုက်လုပ်ဖို့ရှိသေးတော့ အလုပ်ကိုစိတ်ထဲနှစ်ထားရမယ် နို့မို့ဆိုအားတာနဲ့ တွေးမိပြီးရင်ထဲစို့နေရာ.. အလုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြော်ငြာpostလေးတွေရယ် အလှပုံတွေရယ် ဒီချိန် မတင်ရက်ဘူး မတင်ချင်ဘူး..(လလယ်လောက်မှပုံမှန်ပြန်တင်ပေးပါ့မယ်နော်) ” ဆိုပြီးရေးသားထားတာပါ။
ခတျေ၊ သဈ တို့ရဲ့ မမေခေဈြသုဝကေတော့ ခဈြစရာကောငျးလှနျးလှတဲ့ သူမရဲ့အပွုအမူလေးတှကွေောငျ့ ပရိသတျတိုငျးကခဈြနရေတာပါ။ ကလေးအမလေို့ထငျမှတျစရာမရှိရလောကျအောငျ နုပြိုလှနျးသူလေးလညျးဖွဈပါတယျ။ သရုပျဆောငျတဲ့နရောမှာလညျး ပီပွငျကြှမျးကငျြရုံမကပဲ အဆိုဘကျမှာလညျး ပါရမီရှိသူတဈဦးလညျး ဖွဈပါတယျ။
သူ မ ဟာ လတျတလောမှာဖွဈနတေဲ့ နပွေညျတျောက ဗဈတိုးရီးယားလေးရဲ့အမှုကိစ်စအတှကျစိတျမကောငျးကွီးစှာဖွဈနရေတာပါ။ သမီးလေးနဲ့ပကျသကျပွီးတော့လညျး သူမတို့ဇနီးမောငျနှံနှဈယောကျလုံးဟာ တကျတကျကွှကွှပါဝငျဆောငျရှကျနတောလညျး ဖွဈပါတယျ။ ဒီအမှုနဲ့ပကျသကျပွီးတော့လညျး ထှကျရှိသမြှသတငျးတှကေိုလညျးအခြိနျနဲ့တဈပွေးညီဝမြှေပေးနတောပါ။ လှနျခဲ့တဲ့ မိနဈပိုငျးကလညျး ဒီအမှုကိစ်စနဲ့ပကျသကျပွီး သူမရဲ့လူမှုကှနျယကျစာမကျြနှာမှာအခုလိုရေးသားခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။
” Victoria အမှုဟာ တဈနိုငျငံလုံးကသားသမီးရှိတဲ့မိသားစုတှနေဲ့ဆကျဆိုငျတဲ့အမှုပါ..”
သမီးလေးမမေရေဲ့ မကျြရညျနဲ့ပွောတဲ့ သမီးလေးအပျေါထားတဲ့သူ့ရဲ့မတ်ေတာတှေ,ယူကြုံးမရမှုတှေ,ကွောကျရှံ့သိမျငယျရမှုတှကေ နားထဲပဲ့တငျနရေောပဲ..နဂိုကစိတျနုတဲ့ကိုယျ့မှာ ခေါငျးထဲမရောကျခငျြပဲရောကျလာတိုငျး မကျြရညျတှကေရြတယျ..
ကိုယျသမီးလေးတှအေတှကျလညျး ဒီမွဒေီရေ ဒီဥပဒအေောကျမှာ ကွီးပွငျးလာရမှာတှေးရငျးရငျတှပေူ ဗလောငျဆူ ,,မဖွဈသေးတာတှကွေိုတှေးပူ..,,
အလုပျတှဆေကျတိုကျလုပျဖို့ရှိသေးတော့ အလုပျကိုစိတျထဲနှဈထားရမယျ နို့မို့ဆိုအားတာနဲ့ တှေးမိပွီးရငျထဲစို့နရော.. အလုပျနဲ့ပတျသကျတဲ့ကွျောငွာpostလေးတှရေယျ အလှပုံတှရေယျ ဒီခြိနျ မတငျရကျဘူး မတငျခငျြဘူး..(လလယျလောကျမှပုံမှနျပွနျတငျပေးပါ့မယျနျော) ” ဆိုပွီးရေးသားထားတာပါ။
နေကာမျက်မှန်တို့ အကြောင်း သိကောင်းစရာ
(တန်ဖိုးရှိလွန်းလို့ဖတ်ကြည့်ပါ ) မြွေ အဆိပ်အမျိုးမျိုး နှင့် ရောဂါ (၁၈) ပါး ကို ပျောက်ကင်းနိုင်သော ကြောင်လျှာသီး ကြောင်လျှာရွက် ကြောင်လျှာပင်
“ကားချစ်တဲ့ ဖခင်အတွက် ကားလက်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ ဟဲလေး”
“လေယာဉ်ပေါ်က …အမျိုးသမီးအိမ်သာကြောင့်် ဆေးရုံရောက်ရတဲ့...
ဗိုလ်ချုပ် ရုပ်ရှင်အတွက် …အဝတ်စားတွေကို …...
ပရဟိတကို… ပေါ့သေးသေးထင်ရင် …မှားမယ်လို…့ ပြောလိုက်တဲ့…...